Nwanyị Nwanyị Ezi Enyemaka - WRSP
AMAKA NMA DI MMA
NWAANYI ANYI ANYI NMA
1831 (Jenụwarị 30): Marie Adele Joseph Brise mụrụ na Dion-le-Val, Brabant, Belgium.
1855: Brise na ezinụlọ ya si na Belgium kwaga Wisconsin.
1859 (October): Brise nwere ọhụụ atọ nke Virgin Mary nke a gwara ya ka ọ kụzie
ụmụ banyere Chineke.
1859: Nna Brise wuru ụlọ nsọ mbụ na saịtị ahụ.
1867: schoollọ akwụkwọ izizi, St. ụlọ akwụkwọ chie akwụkwọ mepere na 1869.
1871 (October 8): Brise duziri nche nche n'ekpere n'oge ụka Peshtigo. Achọpụtaghị acres ise niile nke ụlọ ụka ahụ ka ebibiri ala ndị gbara ya gburugburu.
1896 (July 5): Adele Brise nwụrụ.
1933: E degharịrị ụlọ akwụkwọ ahụ ka ọ bụrụ thelọ maka Cmụaka Nkwarụ.
1941: E wuru ụlọ ụlọ ugbu a.
1953: Emechiri forlọ maka Cmụaka Nkwarụ ma guzobe ụlọ akwụkwọ sekọndrị Pre-Novitiate.
1968: Emechiri ụlọ akwụkwọ sekọndrị. Canmụ nwanyị nwanyị Franciscan gara n'ihu na-elekọta shrine
1970: Ala ahụ ghọrọ Houselọ Ekpere.
1992-2002: Smụ nwanyị Carmelite si Grand Rapids, Michigan weghaara ọrụ maka ụlọ nsọ.
2002: Diocese dị n'ógbè ahụ weghachitere ịchịkwa ụlọ arụsị.
2009 (Jenụwarị 9): Bishọp David Ricken họpụtara kọmitii iji nyochaa nkwupụta mbụ nke Brise.
2010 (Disemba 8): E gosipụtara saịtị ahụ ma bụrụ nke mbụ Chọọchị Roman Katọlik a nabatara na United States.
A mụrụ Marie Adele Joseph Brise na Lambert na Marie Brise na Dion-le-Val, Brabant, Belgium na Jenụwarị 30, 1831. Dịka nwata ọ
na ọtụtụ ndị enyi kwere nkwa isonye n'usoro okpukpe. Otú ọ dị, Brise sooro ndị mụrụ ya biri na ezinụlọ dara ogbenye ruo mgbe 1855 mgbe ezinụlọ ahụ kwagara America. Ezinụlọ ahụ zụtara ala dị hekta 240 iji kwado onwe ya. Ọ bụ afọ anọ ka nke ahụ gasịrị, n'October, 1859, obere oge mgbe Marian pụtara na Lourdes, na Brise nwere nke mbụ n'ime ahụmịhe ọhụụ atọ. Ọ nọ na-ebugharị ọka n'otu igwe nri na Champion, Wisconsin mgbe Nwa Agbọghọ Na-amaghị Nwoke bụ Meri pụtara n'ihu ya: “Ọ hụrụ otu nwanyị yi uwe ọcha nke na-enwupụ enwupụ, nke kechiri n'úkwù n'úkwù ya na okpueze nke kpakpando n'isi ya nke guzo n'etiti osisi abụọ, otu maple, nke ọzọ bụ mgbochi ”(Shrine 2010). Brise hụrụ ahụmahụ ahụ na-atụ ụjọ. Na Sọnde, Ọktoba 9, ihe omume nke abụọ mere mgbe Brise na-aga Mass na Bay Settlement, agbataobi na ndị enyi ya abụọ. Naanị Brise nwetara ọhụụ ozugbo. N'ikpeazụ, mgbe ọ na-ala n'ụlọ ụka, Brise hụrụ onye pụtara ihe n'otu ebe maka oge nke atọ na nke ikpeazụ. Mary kwuru na ya bụ “Nwanyị Nwaanyị nke Eluigwe” ma gwa Brise na ya ga-akụziri ụmụaka ka ha si ebi ndụ maka Chukwu. Site n'ụbọchị ahụ gaa n'ihu, Brise tinyere ndụ ya na nkuzi nke okwukwe Katọlik nye nwata
.mụaka. N'oge na-adịghị anya ụlọ akwụkwọ ahụ bịara, ụlọ akwụkwọ St Mary's Academy, na 1867 (Mann 2011). Brise chịkọtara ọtụtụ ụmụ akwụkwọ n'oge a wee bido ịkụziri ha na Lady nke Ezi Enyemaka.
Ọtụtụ afọ ka emechara ụlọ akwụkwọ ahụ, ọkụ na-ebibi ihe gbara gburugburu gburugburu ya. Na October 8, 1871, ọtụtụ ụmụ amaala na ndị nwe ala na mpaghara ndị gbara ya gburugburu chọrọ ebe mgbaba n'ụlọ ụka ahụ site na ihe a bịara mara dị ka ọkụ Peshtigo. Ndị a sonyeere Brise n'usoro gburugburu ụlọ uka ahụ iji chebe ha. Ka ọ na-erule n'ụtụtụ, ọkụ ahụ gbanyụrụ mmiri ozuzo ahụ, ya Nwanyị Nwanyị Enyemaka Dị Mma nọgidere bụrụ onye a na-akpabeghị aka. A na-ahụta nke a dị ka ọrụ ebube ọtụtụ ndị, ọkachasị n'eziokwu bụ na ire ọkụ na-ere ebe ndị agbata obi ya na ihe karịrị 2,000 hụrụ na ọ nwụrụ (Kasten 2010).
Mgbe Brises nwụsịrị na 1896, e liri ya n'akụkụ ebe ngosi mbụ ahụ. N'oge ahụ akara aka nke saịtị ekpere na ụlọ akwụkwọ ọ dị ka ejighị n'aka. Schoollọ akwụkwọ ahụ tara ahụhụ na-enweghị ọnụnọ ya ma nyefee ya n'aka Sr. Pauline LaPlante, onye bụbu onye otu Sisters of St. Francis nke Holy Cross nke Bay Settlement (Kasten 2010). Ọ rụrụ ọrụ iji gaa ụlọ akwụkwọ ahụ ruo mgbe ọ nwụrụ na 1926 (Mann 2011). N'afọ ndị sochirinụ, ụlọ akwụkwọ gbanwere aka na ihu ọtụtụ oge. Na 1933, emegharịrị ya ka ọ bụrụ thelọ maka Cmụaka Nkwarụ, na 1953, Bishọp Paul Rhode kwụsịrị ụlọ wee gbanwee ya ka ọ bụrụ ụlọ akwụkwọ sekọndrị tupu ụmụ nwanyị nọ na Bay Bay. Na 1990, ọ ghọrọ Houselọ Ekpere maka Bay Settlement Sisters ruo 1990 mgbe diocese ahụ na-achịkwa ala. Diocese ahụ gbanwere ihe onwunwe ahụ n'ụlọ arụsị ma nabata ya na otu ndị Carmelite Sisters bụ ndị tọrọ ntọala Carmel nke Aha Nsọ Jizọs na 1992 (Kasten 2010). Afọ iri ka nke ahụ gasịrị, Kamel gafere n'ime ime obodo Denmark.
N'oge ahụ, Nwanyị Nwanyị Nwanyị Ezi Enyemaka ka dị mkpa na ndị obodo, mana ọ bụ obere nlebara anya mba na mba. Ndị Bishọp nke Green Bay kwadoro rinelọ Nsọ nke Nwanyị Anyị nke Ezi Enyemaka dị ka ebe ekpere, mana enwebeghị nkwado ma ọ bụ nkwupụta ọkwa ọ bụla gbasara ngosipụta ahụ. Nke a gbanwere na Jenụwarị 9, 2009 mgbe Bishọp David Ricken mepere nyocha nyocha na ngosipụta. Ihe na-erughị afọ abụọ ka nke ahụ gasịrị, o kwupụtara na ọbịbịa ahụ e nyere Adele Brise bụ eziokwu kwesịrị ekwenye ma gosipụta ụdị njirimara karịrị mmụọ (Sly 2010).
Adele Brise bụ naanị onye ọhụụ na Nwanyị anyị nke Ezi Enyemaka. Ọ kọghị ọhụụ ọ bụla ma ọ bụ ọhụụ ọ bụla tupu ma ọ bụ mgbe ọ gasịrị atọ na saịtị ahụ nke a ga-akpọzi dị ka Nwanyị anyị nke Ezi Enyemaka. Ọ bụ na ihe omume nke atọ, nke mere mgbe Brise na-alaghachi n'ụlọ ụka wee nata ozi mmụọ ya (Shrine 2010; Kasten 2010). Brise kọrọ na ọ jụrụ ọnụ ọgụgụ ahụ “N'aha Chineke onye ị bụ na gịnị ka ị chọrọ n'aka m?” A kọrọ na Mary gwara Brise mgbe ahụ na ọ bụ Nwanyị Nwanyị nke Eluigwe ma kenye Brise ozi: “Abụ m eze nwanyị nke eluigwe na-ekpe ekpere maka nchegharị nke ndị mmehie, achọrọ m ka ị mee otu ihe ahụ. Nata Oriri Nsọ n’ụtụtụ a ma ọ dị mma. Ma, ị ga-emekwu. Mee nkwuputa n'ozuzu ma nye udo maka ntụgharị nke ndị mmehie. Ọ bụrụ na ha echigharịghị wee chegharịa, Ọkpara m ga-ata ha ahụhụ. ” Meri nyeziri ntụziaka doro anya karị: “Kpọkọtanụ ụmụaka nọ n'ọhịa a ma kuziere ha ihe ha kwesịrị ịma maka nzọpụta.” Mgbe Brise jụrụ etu ọ ga-esi rụọ ọrụ a n’amachaghị ihe, Mary zaghachiri, sị: “Kuziere ha katekism ha, otu esi ebinye onwe ha akara nke Obe, na otu esi abịaru nso na sakramenti; nke ahụ bụ ihe m chọrọ ka ị mee. Gaa na-atụ egwu ihe ọ bụla. M ga-enyere gị aka. ”
Ihe omume okpukpe na Our Lady of Good Help sitere na nkuzi Katọlik. Dị ka ọ na-adịkarị ọtụtụ ndị otu pụtara, ebumnuche nke saịtị ekpere a bụ ịlaghachi na ihe a ghọtara bụ nkuzi Chukwu. A gwara Bris ka ọ kuziere ụmụaka ka esi ahụ Chineke n’anya na ife ya ofufe. Ndị ahụ bụ naanị ntụziaka ya, ọ gbasoro ha ma chọọ ịgbasa ha iji tinye obodo niile.
Achọpụtala ebe ahụ dị ka ebe ọrụ ebube, na ọtụtụ ndị kwere ekwe na-abịa kwa ụbọchị na-efe ma na-arịọ Meri Mary. Ọtụtụ ndị gara na saịtị ahụ agbaala akaebe na ha gwọrọ ha adịghị ike ha ma ọ bụ dozie nsogbu ndị ha chere na ha enweghị ike ịkọwa na mbụ ("Marian Apparitions" 2010). Ọrụ ebube kacha mara amara nke Nwanyị Nwanyị anyị nwere Ezi Enyemaka bụ nlanarị nke ọkụ Peshtigo nke dị n’abalị asatọ nke ọnwa asatọ n’afọ 8. N’agbanyeghi na ala nile gbara gburugburu ebe ekpere na ụlọ akwụkwọ lara n’iyi n’ọkụ a na-emebi ihe, ogige nke ụlọ ụka ahụ na onye ọ bụla nọ eweputaghi ha.
Mgbe Bishop Ricken kwusịrị saịtị ahụ na 2010, Bishọp Ricken kwuru na "Ndụ Nwanne nwanyị Adele so n'ime ihe akaebe kachasị mma maka ịdị adị nke ngosipụta" (Mann 2011). N’ezie, nke ya bụụrụ ndụ ya dum ndụ nye ozi Meri zigara ya. O kwenyere na ngosipụta ndị a n'otu akụkụ n'ihi na Brise anwaghị anwa iji ha mee ihe. Ọ chọghị nlebara anya ma ọ bụ ụgwọ ọ bụla. Kama, ọ gbalịrị ibi ndụ dịka a gwara ya ka ọ gafere karịa ọrụ ọrụ. N'ikpeazụ, a kwadoro izi ezi nke saịtị ahụ na akụkụ ụfọdụ n'ihi ozi ahụ n'ezie. Bishọp Ricken kwuru na ịdị mfe ozi na nghọta doro anya kwuru maka eziokwu ha. Ntụziaka ndị ahụ "dị mfe, mana ejiri nnukwu ozi Oziọma na nkuzi nke ofka" buru ibu (Mann 2011). Ozi ndị a tinyere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị gbara akaebe na a gwọrọ ha ma ọ bụ nyere aka na saịtị ahụ butere nkwado nke Nwanyị Nwanyị Ezi Enyemaka.
Ndi mmadu sitere na ndu di iche-iche na akuku obodo gbakoro na Our Lady of Good Help kwa ubochi ikpe ekpere na ife ofufe. Uka bu emere ugboro anọ n'ụbọchị na ụlọ ụka ahụ maka ndị chọrọ maka naanị ntụgharị uche mmadụ na saịtị. Ndị njem ala nsọ na-agba akaebe banyere àgwà pụrụ iche nke saịtị ahụ: "'Ọ bụ ihe ịtụnanya - ọ nọ ebe a, ị na-eche ya', Nwada Banda kwuru mgbe o kpesịrị ekpere n'ụlọ ụka ahụ siri ike, kwuru na ọ ga-anọ ebe ahụ. Ka ha na-agafe otu ihe akpụrụ akpụ nke Meri na-acha ọcha, dị ka Nwanyị Bris si kọwaa, Oriakụ Banda nwere mmụọ, na-ebe akwa ma na-amakụ nne ya. Ha abụọ laghachiri ikpe ekpere ọzọ ”(Eckholm 2010). Ọzọ pilgrim kwuru na "Enwere ike dị ukwuu ebe a ... .ou nwere ike ịnwe ọnụnọ Meri, ọ na-adị ka ọ na-ege gị ntị" (Eckholm 2010). A na-ahapụ ọtụtụ mkpịsị osisi na okpete n'azụ ụlọ nsọ ahụ. Ndị nwe ihe ndị a hapụrụ ha na-ekwu na enyemaka adịghịzi ha mkpa.
Kwa afọ, e nwere ihe omume dị iche iche iji sọpụrụ saịtị na Virgin Mary. Na October 8, ndị njem ala nsọ na-agbakọta iji megharịa usoro ahịhịa nke malitere n'oge ọkụ Peshtigo. N’ọnwa Mee, a na-enwe Mass n’èzí n’afọ ọ bụla nke gụnyere usoro ọzọ na ụlọ ụka. Ọ bụ Norbertine Fr. guzobere ọdịnala a. Bernard Pennings na 1895 (Kasten 2010). N'ikpeazụ, ọdịnala a ma ama bụ Mass kwa afọ na oriri nke Assumption. Ihe omume a na-eme na August 15 na, site n'ụtụtụ ruo n'abalị, a ga-ahụ ụgbọ ala ndị na-edochi na shrine.
N'ime ụbọchị nke ọhụụ ikpeazụ nke Brise na 1859, nna ya, Lambert Brise, wuru obere ụlọ iri na iri na abụọ na ụlọ nsọ iri na abụọ na saịtị ahụ. E mere ka uka ahụ dị iri abụọ na anọ site na ụkwụ iri anọ na 1861; e wuru ụlọ ụka nke atọ nke iwu brik na 1880.
N’ịgbaso ntuzi-aka nile ọ natara n’aka Meri na 1859, Brise, gbara afọ iri-asatọ na asatọ, malitere ịkụziri ụmụ-ntakịrị Katọlik okwukwe o nwere ike iru. Ọtụtụ ụmụ agbọghọ sonyeere ya ka ha nwee "otu obodo nke usoro nke atọ (nke ego) Franciscans" wee chọta St Mary's Academy na 1869 (Shrine 2010). Obere umuaka mechara buru umu iri-iteghete na ise. Brise enwetaghị ego maka ụlọ akwụkwọ a, kama ịdabere na onyinye. Mgbe ụfọdụ, ọ rịọrịrị maka enyemaka na ego maka ụlọ akwụkwọ. Brise kwụsiri ike na ozi ya ruo mgbe ọ nwụrụ na 1896.
N'ụzọ dị mwute, na-enweghị ọnụnọ Brise, ndị isi ụlọ akwụkwọ dara ada. Ruo oge ụfọdụ, etinyere ụlọ akwụkwọ ahụ n'aka Sr. Pauline LaPlante. LaPlante bụ otu n'ime ndị mbụ so na obodo ahụ, ọ na-ejikwa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ofufe ahụ Brise nwere n'ụlọ akwụkwọ ahụ site na 1902 ruo mgbe ọ nwụrụ na 1926. N'oge ahụ, agbanwere ụlọ akwụkwọ ahụ n'ọtụtụ oge. Ọ ghọrọ ebe obibi maka ụmụaka ngwọrọ na 1933, ụlọ akwụkwọ sekọndrị nke pre-noviate maka ụmụ nwanyị Bay Settlement Sisters na 1953, na, n’ikpeazụ, ebe maka Carmel nke Aha Nsọ nke Jizọs n’afọ 1992. Mgbe ụmụnne nwanyị Carmel gabigara na 2002 , e weghachiri saịtị ahụ na ụlọ ụka na ụlọ nsọ nke raara nye ọhụụ nke Brise zutere na 150 afọ gara aga (Kasten 2010). Ọ bụ ezie na saịtị ahụ enwetara nkwado na-enweghị enyemaka site n'aka ndị bishọp obodo site na akụkọ ntolite ya dị ka njem njem na ebe ekpere, emeghị ka ọ dị mma ruo mgbe 2009 mgbe Bishop David Ricken nyere iwu nyocha banyere eziokwu nke ngosipụta mbụ. N'ime afọ abụọ sochirinụ nyochara akwụkwọ akụkọ ihe mere eme dịnụ: “Anyị edeela akaebe, ụfọdụ akaebe - edere mgbe e mesịrị, tinyere ọtụtụ akwụkwọ - akwụkwọ ozi dị n'etiti Nwanne nwanyị Adele na bishọp, wdg,
Bishop Ricken na-echeta ”(Kim 2011).
N'ihe na-erughi afọ abụọ ka e mesịrị, Ricken kwuru hoo haa na enwere ike ịkwado saịtị ahụ dị ka saịtị karịrị nke mmụọ na nke okpukpe. ("Ebe Wisconsin" 2011). O kwuru na "Ana m ekwupụta n'ụzọ doro anya n'omume na n'ụzọ kwekọrọ n'ụkpụrụ nke Churchka na ihe omume, ngosipụta na ọnọdụ e nyere Adele Brise na Ọktoba nke 1859 na-egosipụta isi okwu nke agwa karịrị mmadụ, na m na-akwado nke a ngosipụta dị ka ndị kwesiri nke nkwenkwe (ọ bụ ezie na ọ bụghị iwu) site n'aka Onye Kraịst kwesịrị ntụkwasị obi "(" Marian Apparition "2010).
Site na mbido, Brise enwetaghị enyemaka ma ọ bụ mmata. Nna ya wuru ụlọ arụsị mbụ ahụ na ebe ngosi ahụ n'onwe ya. Brise nọkwa naanị ya mgbe ọ malitere ụlọ akwụkwọ ya na inyere ụmụaka aka. E wuru ụlọ akwụkwọ mmuta nke St. Mary, ụlọ akwụkwọ obibi, na 1867. N'ime afọ ise, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu narị ụmụ akwụkwọ debara aha. Ọ tụkwasịrị obi kpamkpam n'okwukwe ya na onyinye ole na ole e nyere ya. N'oge ụfọdụ, mgbe ụlọ akwụkwọ enweghị ego na mkpa inweta ihe, Brise na-arịọ arịrịọ iji nweta ego ha chọrọ. Mgbe Brise nwụsịrị, obere nkwado nke na-adịbu belatara wee belata.
Thelọ akwụkwọ na ala ahụ gafere site n'aka ruo n'aka rue na ngwụcha, na 2009, Bishọp David Ricken malitere nyocha banyere izi ezi nke saịtị ahụ. Tupu a nyochaa saịtị ahụ, mmadụ iri atọ na iri ise kwa ụbọchị ga-eme njem gaa Nwanyị Anyị nke Ezi Enyemaka (Keen 2011). Kaosinadị, ozugbo Bishọp Ricken kwupụtara na saịtị ahụ "kwadoro" na "nke kwesịrị nkwenye site n'aka Ndị Kraịst kwesịrị ntụkwasị obi," ọnụọgụ a rịrị elu ruo ihe dị ka mmadụ 500 kwa ụbọchị (Mann 2010). Site na nleta na-arịwanye elu, e kenyere ndị ụkọchukwu abụọ oge niile n'ụlọ arụsị (Keen 2011).
Enweela enyo ndị egosiri na ndị nta akụkọ na nchọpụta diocese ahụ kwesịrị ka ọ bụrụ oge iji wezuga uche pụọ n'okwu ikpe onye ụkọchukwu na-emegbu ndị Katọlik na-eme. Bishọp Ricken zara ebubo ndị a: "Ndị mmadụ nwere agụụ maka mmụọ, ma ebe a na azụ ụlọ anyị bụ ebe a ga-esi gboo mkpa a." Ọ gara n'ihu igosipụta atụmanya na ụlọ nsọ ahụ ga-abụ isi iyi nke olileanya na ọgwụgwọ (Eckholm 2010). N’agbanyeghi udiri enyo na ntughari a, nkwuputa Bishop Ricken nke “ime omume doro anya” ewetala ndu ohuru na mmata nye Our Lady of Good Help (“Wisconsin Site” 2011).
Eckholm, Erik. 2010. "Wisconsin na eserese ka mụ na Meri kpee ekpere." New York Times , December 23. Nweta site na http://www.nytimes.com/2010/12/24/us/24mary.html?_r=0 na 22 November 2013.
Kasten, Patricia. 2010. “Mary duziri ya, Adele Brise Kụziri aboutmụaka banyere Okpukpe Katọlik.” Kompas , December 9. Nweta site na http://www.thecompassnews.org/news/local/1794-guided-by-mary-adele-brise-taught-children-about-catholic-faith.html na 31 October 2013.
Keen, Judy. 2011. "Kwesịrị Ntụkwasị Obi Gaa na Wisconsin Shrine." USA Today , September 22. Nweta site na http://usatoday30.usatoday.com/news/religion/story/2011-09-22/wisconsin-virgin-mary-shrine/50519566/1 on 20 November 2013 .
Kim, Susan. 2011. "Official Holy Site Near Green Bay." Nweta site na http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.620wtmj.com%2Fnews%2Flocal%2F115996504.html&ei=yLeSUp6YI4uikQeCqoGICg&usg=AFQjCNET9GWym9VHvgT10dawcHCxTLnUIg&sig2=STdBrHBGxoAfK1eyI4km1w&bvm=bv.56988011,d.eW0 na 22 November 2013.
Nwoke, Benjamin. 2010. "Wisconsin banye n'plọ Ekpere Kwadoo dị ka mbụ US Marian Apparition n'Sitentanet." Katọlik News Agency , December 9.. Weebụ. 01 Nov 2013.
"Marian Apparitions na Shrine of Our Lady nke Ezi Enyemaka nke Bishop Ricken kwadoro." 2010. DA MIHI ANIMAS , December 8. Nweta site na http://salesianity.blogspot.com/2010/12/marian-apparitions-at-shrine-of-our.html na 20 November 2013.
Shrine of Our Lady nke Ezi Olile Anya. 2010. "Akụkọ Nkọwa Dị Mkpirikpi." Nweta site na http://www.gbdioc.org/images/stories/Evangelization_Worship/Shrine/Documents/Shrine-History-Brief.pdf na 28 November 2013.
Ezigbo, Randy. 2010. "rinelọ Nsọ nke Nwanyị Anyị nke Ezi Enyemaka natara Iwu site n'aka Bishọp nke Green Bay." Catholic Online . Disemba 11. Nweta site na http://www.catholic.org/hf/faith/story.php?id=39511 na 01 November 2013.
"Wisconsin Site lere 'Nsọ' site Catholic ndú." 2011. Oge Seattle , February 14. Nweta site na http://seattletimes.com/html/nationworld/2014222320_apusholysitegreenbay.html na 20 November 2013.